Nzira yekuchenesa sei mazamu ehutano mumaminitsi nemaminetsi angu?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 14, 2018 | hofisi
Iwe unogona kunge watobaya kukoka kwakakurumbira senge "Bvumidza application X kuti uwane yako data paFacebook (kana zvimwe)", nokudaro uchibvumira iyo application kuti inyore panzvimbo yako, uwane ruzivo rwako uye dzimwe nguva kunyangwe kushandisa izvi nekuda kwekutengesa.
Zvechokwadi, iwe waive nechido chikuru, pasinei neunyanzvi, ergonomic kana kuti yekuvaraidza kubvuma rudzi urwu rwemvumo uchiyeuka mupfungwa kuti iwe unogona kubvisa chiremera munguva yakakodzera. Zvinosuruvarisa, nekufamba kwenguva, izvi zvidzidzo zvakatanga kuwedzera, kuderedza kushandiswa kwako kwemasvomhu, kushambadzira pasina kubvumirana kwako kumapoka akasiyana uye dzimwe nguva kunyange kuba zvikwereti zvako kuti utengese kune akakwidziridza pasina kunyange kukuudza.
Kana iwe wanga uri savvy yemagariro enhau mushandisi kwemakore akati wandei, iwe ungangodaro wakaunganidza zvisingaverengeke zvibvumirano zveapp, saka kuzviwana dzese padandemutande rega rega kunotora yakawanda nguva!
Ndokusaka pane gadziriro yakagadzirirwa kugadzirisa mumaminetsi mashomanana nemishandiso isina kudiwa, iyo kunyoresa MyPermissions.
MyPermissions inoshanda sei?
Inowanikwa muchiFrench, ChiGermany neChirungu, MyPermissions inoshandiswa iyo inokubvumira mune zvishoma zvichitsvaga kubvisa kushandiswa kwemashure kana kushanda kwekuda kuziva izvo zvinongoparadzanisa mitambo yako zuva rimwe nerimwe.
Kushanda kweMyPermissions kuri nyore kwazvo, ingobatanidza iyi shanduro kumakandani enyu evanhu vemunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti muone urongwa hwemapurogiramu ane chokuita neakakani enyu akasiyana.
Kutenda kune urongwa uhwu, iwe uchave nekwaniso kwehuwandu hwemashoko anowanikwa kune rumwe rutivi rwekushanda, asi iwe uchaziva zvakare kana chikumbiro chekukumbira ruzivo chete nokuda kwekushanda kwayo zvakanaka kana kana ichiedza pamusoro pezvose kuti zvive zvako ruzivo. data yega.
VERENGA Dashboards muExcel, kudzidza pasina njodzi yezvikanganiso.
Kune rumwe rutivi, MyPermissions ichakubvumira kuti ubvise kamwe chete kushandiswa kwesarudzo yako nekudzora zvibvumirano zvose zveizvi panguva imwe chete. Iwe uchakwanisa kuchengetedza nguva inokosha kuburikidza nekugadzirisa chero chinhu chisina maturo.
Nokudaro, nokuda kweizvi, intuitive uye inoshanda, haufaniri kunetseka nezvekushandiswa kwepasimusi uye kusashandiswa. Iwe unongofanira kuchengeta izvo izvo zvinokushandira iwe zvechokwadi kana kunyange kutozvichenesa zvose kuitira kuti usafanirwa kuzvidya mwoyo pamusoro pavo zvakare.
Mukuwedzera, MyPermissions inoshanda senhare yekuongorora kuti zvitsva zvitsva hazvifambi pasina ruzivo rwako nekusaziva pakushamwaridzana. Kuzorodza kwechokwadi mumutambo wakazara nemisungo yekubira data yako nguva imwe neimwe.
Mumwe anogona kunge achishamisika kana kushandisa shanduro kubvisa mamwe maitiro hakuzove kunyadzisa uye kana MyPermissions isiri, pakupedzisira, asi imwe shanduro yekuunganidza deta yako.
Ziva chokwadi, MyPermissions haizvibvumidze pachayo kuchengetedza ruzivo rwako munzira ipi neipi uye inongokumbira iwo mashoma mvumo yekubvisa kunyorera kwesarudzo yako. Uyezve, kana iwe usiri kuda kuchengeta chero maapps pane ako maratidziro, unogona kugara uchiabvisa iwo pamurume chero nguva!
Saka, usamirira zvakare uye tanga iyo huru yekuchenesa-up!
Nzira yekuchenesa sei mazamu ehutano mumaminitsi nemaminetsi angu? August 25th, 2020Tranquillus
pashureTsvaga AccountKiller, we universal user guide iyo inokubatsira kubvisa recalcitrant maakaunti.
zvinoteveraEmail Template yekudaidzira
Basa reGoogle, kana kuti sei kuziva zvose pamusoro pezviito zvako zvine chokuita neGoogle nemasangano ayo akasiyana-siyana.
PowerPoint inofamba mifananidzo yekudzidzisa
Shanda muzvikwata uye nekure kure neSlack .. Tauriranai munguva chaiyo
Chenesa yako Facebook mbiri, unzwisise kukosha kwenzvimbo dzekudyidzana dzemufananidzo wako.